Soo-saareyaasha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Raw Drostanolone Propionate - Warshadda
Dronesanolone propionate waa aerosober iyo hormar dheer oo daawada drostanolone ee jidhka. Marka lagu daro adeegsigeeda caafimaadka, daaweynta drostanolone waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo jirka iyo waxqabadka.
Daawo Daawo Drostanolone Propionate (Macmacaanka Masteron Propionate) (521-12-0) video
Dufanka Drostanolone Propionate (Masteron Propionate) budada (521-12-0)
Drostanolone propionate propionate, ama dromostanolone propionate, oo la yiraahdo Drolban, Masteril, iyo Masteron oo ka mid ah kuwa kale, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) oo loo isticmaalay in lagu daweeyo kansarka naasaha ee haweenka laakiin hadda lama iibin. Waxaa lagu siiyaa cirbadaha murqaha.
Dronesanolone propionate waa aerososin iyo estrug-dheer ee daawada drostanolone ee jirka. Daawada Drostanolone waxaa markii hore lagu sharraxay 1959 waxaana loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1961. Marka laga soo tago isticmaalka daawada, daawada drostanolone waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo jirka iyo waxqabadka.
Dufanka Drostanolone Rootiga ah (Bixinta Masteron Propionate) (521-12-0) Smamnuucista
Product Name Dufanka Drostanolone Badeecada (Masteron Propionate) budada
Magaca Kiimikada PROMOSTANOLONE PROPIONATE; Drostanolone propionate; 521-12-0; Blackburn Compound; Emdoonoon; Permastril More ...
Molecular Wsideed 360.53
barafku Psaliid 114-120 ° C
Biological Life-Life 2.5 maalmood
Application Dronesanolone propionate waa aerososin iyo estrug-dheer ee daawada drostanolone ee jirka. Daawada Drostanolone waxaa markii hore lagu sharraxay 1959 waxaana loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1961. Marka laga soo tago isticmaalka daawada, daawada drostanolone waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo jirka iyo waxqabadka.
Maxay tahay budada loo yaqaan 'Raw Drostanolone Propionate'? (Masteron Propionate) (521-12-0)?
Drostanolone propionate propionate, ama Masteron Propionate, oo lagu iibiyo magaca hoosta Drolban, Masteril, iyo Masteron iyo kuwa kale, waa daawada asaasiga ah iyo anabolic steroid (AAS) kaas oo loo isticmaalay in lagu daweeyo kansarka naasaha dumarka. Waxaa lagu siiyaa cirbadaha murqaha.
Sidee budada Drostanolone Propionate (macmacaanka Masteron Propionate) (521-12-0) shuqullada
Masteron propionate (521-12-0), oo loo yaqaan 'Drostanolone propionate' waa qaabka asalka ah ee Masterone sidaas oo lagu barbardhigo Macdanta Masteron, waxay ku guulaysataa si caan ah. Inta badan dadka isticmaala steroid waxay aqoonsadaan Masteron sida magaca caanka ah ee Masteron propionate.
Dufanka Drostanolone Badeecada (Masteron Propionate) budada (521-12-0) Qiyaasta
Ujeedada hagaajinta jirka iyo kor u qaadida, qiyaasta Masteron guud ahaan waxay ku dhici doontaa inta u dhaxaysa 200 - 400mg asbuuc ahaan habka guud ee meesha ugu hooseysa ee xadka (200mg todobaadle) sida caadiga ah waxaa loo isticmaali doonaa wareegyada diyaarinta ka hor. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta ugu sarreysa ee 400mg toddobaadkiiba guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa sida qiyaasta ugu fiican ee xitaa bilawga bilawga ah inay bilaabaan. Waa in la fahamsan yahay in Ujeedada Masteron ay ugu horreyn u tahay kor u qaadista heesaha oo ay ka saarto inta badan qaybta hoose ee biyaha si ay u keenaan 'adag' iyo 'khafiif' eegto jirka. Qiyaasta loo baahan yahay inay ka soo baxdo saameyntani caadi ahaan uma baahna in la kordhiyo inta u dhaxaysa mid kasta oo ka mid ah sadexda qaybood ee isticmaalaha (kuwa bilowga ah, dhexdhexaad, iyo heer sare). Gaar ahaan, kuwa bilowga ah ee Masteron badanaa waxay heli doonaan bilowga hormoonnada Masteron si loo noqdo asbuuc 400mg. Isticmaalayaasha dhexdhexaadka ah waxay helayaan qiyaasta Masteron ee isku midka ah ee la aqbali karo, isla markaa si la mid ah dadka isticmaala horumarka ah iyagoo tixgelinaya in mar kale, saameynta la rabo laga bilaabo Masteron waa mid ka mid ah saameynaha heesaha, taas oo aysan jirin wax shuruud ah in laga dhigo meel hoose ama ka sareeya qiyaasta (400mg asbuucii). Inta badan dadka isticmaala steroids anabolic weligood ma dooran doonaan Masteron si ay u qabtaan shaqada sida mid ka mid ah xeryahooda asaasiga ah ee ugu muhiimsan ee wareegga ah, maadaama kaliya ma laha heerka heerka xoog ah oo qiimo kale oo dheeraad ah ee stabdhabka anabolic. Daawooyinka Masteron-ka ee sareeya ayaa loo isticmaali karaa si looga dhigo saamaynta anabolic ee xooggan, lakiin tani waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid aad u qaali ah iyo, inta badan, ka baxsan khibradaha gaarka ah ee Masteron iyo faa'iidooyinka.
Mastaradka Dheddigga ah
Dumarka iyo cayaartoyda haweenka ah, Qiyaasta Masteron ayaa lagu ogaaday in ay ka kooban tahay 50 - 100mg usbuuc walba waa ku filan tahay muddo aan ka badneyn 4 - 6 si looga fogaado dhacdooyinka fayaqabka. Halka isticmaalka haweenku ka walwalsan tahay, heerka ugu hooseeya (50mg asbuucii) waa in la isticmaalo marka hore, maadaama uu fayoobisku noqon karo arrin. Tani waa caddaynta xaqiiqda ah in daawada loo yaqaan 'Masteron dosages' ay ku baaqday xitaa qadar sare (300mg asbuucii) marka loo eego waxqabadka / qiyaasaha kor u qaadista ee lagu taliyay halkan. Daawooyinka sare ee noocan oo kale ah, waxyeelladu waxay noqotey dhibaato aad u weyn inta badan haweenka haweenka ah waana in ay fahmaan dhammaan haweenka Masteron isticmaala.
Sida hore loo soo sheegay, saamaynta Masteron propionate ayaa si fiican loo soo bandhigaa inta lagu jiro jarista wareegyada. Sidoo kale, dadka isticmaala waa inay lahaadaan boqolkiiba dufanka jirka ee aad u hooseeya. Tani waa sababta ugu weyn ee loo isticmaalo qiyaasta qiyaasta daaweynta jimicsiga jirka; Xilligan, badiba shaqsiyaadka ayaa lumi doona dufan xad-dhaaf ah. Masteron propionate wuxuu ka takhalusi doonaa dufanka haraaga ah ee dillaaca dhamaadka wareegga. Saamaynta antiestrogenic ee Masteron propionate waxay hubisaa in muuqaalka muuqaalku uu ku adkaado oo isbedel guud iyo isbedel guud. Saameyntu si kastaba ha ahaatee looma ogola shakhsiyaadka leh wax ka badan 10 dufanka jirka. Nasiib wanaag, kuwa ku tiirsan ee ku filan lama ceeboobi doono, waxay arki doonaan qallajiye iyo muuqaal ka sii adag.
Masteron propionate waa xoogaa daciif ah wareegyada cirbadaha. Sida Preonent Depository, Masteron ayaa laga yaabaa inay ka caawiso isticmaalaha isticmaalka qaar ka mid ah, inkasta oo aanay ahayn wax badan oo la qiyaasey. Si kastaba ha noqotee, faa'iidada qiyaasta ah ee la ogaan karo iyo la ogaan karo waa mid aan suurtogal aheyn noocyada kale ee steroids ku habboon ee wareegyada cirbadaha. Qaar ka mid ah jirka dhismayaasha ayaa laga yaabaa inay doortaan inay ku daraan steroidkan qorshaha boodhka ee lafahooda barafka iyo hantida anti-estrogenic. Marka xilli-ciyaareedka laga baxo, steroid waxay hubisaa in jirka uusan kaydin dufanka xad-dhaafka ah, laakiin ma aha inay tahay sababta kaliya ee loo adeegsanayo wajiga. Taa baddalkeeda, maareynta jidhka jirka waa in ay noqotaa mid aan suuragal ahayn iyada oo aan loo Xilliga xilliga ka baxsan waxaa lagu gartaa heerar sare oo waxqabadyo aromatase ah oo ay sababtay qiyaasta testosterone. Isku daridda xeryaha Trenbolone ama Nandrolone waxay keenaysaa koror dheeraad ah ee waxqabadka progesterone. Sidoo kale, Dianabol ama Anadrol waxay xawaareysaa hawlaha estrogenic. Nasiib darro, oo leh astaamaha anti-estrogenic, Masteron ma awoodo inuu la dagaalamo waxqabadka dheeraadka ah ee estrogenic
Soo iibso Drostanolone Propionate (Masteron Propionate) budada Buyaas.com